Wafdi balaaran oo ka socda Puntland iyo Muqdisho oo maanta ku wajahan Kismaanyo - Muqdisho Online
Home Wararka Wafdi balaaran oo ka socda Puntland iyo Muqdisho oo maanta ku wajahan...
Wafdi balaaran oo ka socda Puntland iyo Muqdisho oo maanta ku wajahan Kismaanyo
Waxaa la filayaa in ay maanta gaaraan magalaada Kismaanyo wafuud balaaran oo ka kala socota Puntland iyo Gobolka Banaadir. Wafuudaan oo isgu jirta xildhibaano, wasiiro odaydhaqameed iyo waxgard kale ayaa ka qaybgalaya doorashada Madaxweynaha Jubbaland oo la qaban doono maalinta Khamiista.
Wafuudaan ayaa marqaati ka noqon doona qaabka ay u dhacdo doorashada iyo iyaga oo ku dhiirigalinaya shacabka reer Jubbaland qabashada doorasho xalaal ah oo kana tarjumaysa danaha dadka reer Jubbaland.
Waxaa magalaada Kismaanyo horay u joogay xildhibaano ka socda laba aqal kuwaas oo ka qayb galaya doorashada iyo dhaarinta Baarlamaanka labaad ee Jubbaland.
Previous articleMusharax ka tanaasulay doorashada Madaxweynaha Jubbaland
Next articleToos: Khudbadihii musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo Jubbaland oo socda
Guddoomiyaha G/Hiiraan oo ku baxay Shaqaaqadii ka dhacday Jalalaqsi
Axmed Nageeye - October 8, 2019
Cali Khalif Galeyr oo Muqdisho soo gaaray iyo dagaal siyaasadeed ku...
Faysal Ali Axmed (Alteeso) - October 13, 2019